Maxkamadda Degmada Cadaado oo xukun ku riday eedeesanayaal lagu qabtay maandooriyaha Qamrigga. – Bulsho News
Maxkamadda Degmada Cadaado oo xukun ku riday eedeesanayaal lagu qabtay...
Muqdisho-KNN-Maxkamad ku taalo Degmada Cadaado ee gobalka Galgaduud, ayaa xukun ku riday Eedeesanayaal lagu soo eedeeyay in ay wadeen Maandooriyaha Khamriga kuwaa oo lagu soo qabtay Howlgalo ay sameeyeen Ciidamada Booliska Degmada Baxdo. 19-02-2022.
Ugu horeeyntii Taliyaha Saldhiga Booliska Degmada Cadaado ayaa Gudoomiyaha maxkamadda Degmada weeydiistay in lagu qaado Ciqaab u dhiganto Eedeysanayaasha kala ah Mukhtaar Daahir Shire Iyo Maxamed Axmed Cali oo Ciidamada Booliska Degmada baxdo soo qabteen Xili ay wadeen Gaari ay saarnaayeen ilaa 26 kartoon oo ah Maandooriyaha khamriga.
Eedeysanayaasha oo wax laga weeydiiyay in ay gaari ku wadeen Maandooriyaha Khamriga, sidoo kalana Galeen Eeda loo soo jeediyay ayaa shegay in ay galeen Eeda loo soo jeediyay.
Gudoomiyaha Maxkamadda Degmada Cadaado ShiiKh Cabdi Casiis Ciise Cali ayaa ku dhawaaqay xukunka Maxkamada, isagoona shegay in Mukhtaar Daahir Shire Iyo Maxamed Axmed Cali ay maxkamaddu ku xukuntay Min labo sanno oo xabsi ah.
Gudoomiyaha Maxkamadda ayaa sidoo kale amray in la burburiyo Maandooriyaha Khamriga, Waxaana xukunka kadib Amarkasi fuliyay Taliyaha Booliska Degmada Isaga iyo Masuuliyiin kale ayaana Goob fagaaro ah ku burburiyay Khamriga.